China DL-Methionine CAS 59-51-8 maka ndị na-emepụta ihe na ndị na-ere nri (FCC / AJI / UPS / EP) | Ekele
DL-Methionine CAS 59-51-8 maka Nri Nri (FCC / AJI / UPS / EP)
Aha ngwaahịa ：: DL-Methionine
DL – methionine (Abbreviated Met) bụ otu n’ime amino acid 18 na-ahụkarị, yana otu n’ime amino acid asatọ dị mkpa na anụ ahụ na ahụ mmadụ. A na-ejikarị ya eme ihe dị ka nri nri na azụ, ọkụkọ, ezì na ehi iji rie anụ na anụ ufe na-eto eto ahụike. Ọ nwere ike melite mmiri ara ehi secretion nke ehi, gbochie omume nke hepatosis. E wezụga nke ahụ, a pụkwara iji ya dị ka ọgwụ amino acid, ngwọta ntụtụ, ihe oriri na-edozi ahụ, onye na-egbochi imeju na-echebe, ọrịa imeju na-egbu egbu na ịba ọcha n'anya na-egbu egbu.
Enwere ike iji DL-methionine mee ihe na njikọ nke vitamin ọgwụ, mgbakwunye nri na mgbakwunye nri.
DL-methionine bụ otu n’ime ihe ndị mejupụtara amino acid na mmiri ọgwụ amino. DL-methionine nwere mgbochi abụba ọrụ. N'iji ọrụ a mee ihe, a pụrụ iji vitamin sịntetik ọgwụ arụ ọrụ dị ka nkwadebe nchebe imeju.
Dika amino acid di nkpa na aru mmadu, DL-methionine enwere ike iji ya dika ihe oriri na ihe oriri na ihe ndi ozo dika ihe ndi ozo.
Agbakwunyere na nri anumanu, DL-methionine nwere ike inyere umu anumanu aka ito ngwa ngwa n'oge di mkpirikpi ma ihe 40% nke nri ha nwere ike ịchekwa.
Dịka ihe dị mkpa na njikọ protein, DL-methionine nwere mmetụta nchekwa na akwara obi. N'otu oge ahụ, DL-methionine nwere ike gbanwee n'ime Taurine site na sọlfọ, ebe Taurine nwere mmetụta pụtara ìhè doro anya. DL-methionine nwekwara ezigbo ọrụ maka nchekwa imeju na nsị, ya mere a na-ejikarị ya agwọ ọrịa nke ọrịa imeju dịka cirrhosis, imeju abụba na nnukwu ọrịa ịba ọcha n'anya na-adịghị ala ala. Ọ nwere ezigbo mmetụta.
Na ndụ, DL-methionine dị elu na nri dị ka mkpụrụ sunflower, ngwaahịa mmiri ara ehi, yist, na algae.
doro anya & enweghị ntụpọ
Arọ arọ (Pb)
Amino acid ndị ọzọ
Loss na ihicha
Fọduru na mgbanye
Nke gara aga: L-Tryptophan CAS 73-22-3 Maka Nri Nri
Osote: L-Isoleucine CAS 73-32-5 Maka Nri Nri (AJI USP EP)
L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, L-Threonine Nri Nri, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, L-Threonine Pharm ọkwa, Nri oriri na-edozi ahụ,